MUKUDZEI RUKUDZO – Page 6 – Zimbabwe Daily
ZIMBABWE - With no formal training school in the field; arts managers say it has been a struggle to lure Zimbabwean audiences to their various art forms. Impressed by the…
Continue ReadingArts managers chase Zim audiences
ZIMBABWE - Harare based Johanne Masowe Wechishanu YeNyenyedzi prophet Madzibaba Enock real name Herbert Senda (32) was on Tuesday sentenced to 30 days in prison for insulting a fellow prophet…
Continue ReadingProphet jailed over text message
ZIMBABWE - Prophet Walter Magaya of Prophetic and Healing Deliverance Ministries is arguably one the current biggest crowd pullers in the religious circles. It therefore is surprising to find another…
Continue ReadingOn religious turf
ZIMBABWE - With the Zanu PF faction behind embattled Vice President Emmerson Mnangagwa feeling the heat of the ruling party’s seemingly unstoppable factional and succession wars, the camp is now reaching out…
Continue ReadingTeam lacoste courts Mujuru
ZIMBABWE - Supporters of former Vice President Joice Mujuru’s People First movement got a taste of the violent nature of Zimbabwean politics last week after the home of one of…
Continue ReadingMujuru supporter’s home razed down
ZIMBABWE - People's Democratic Party leader, Tendai Biti, says President Robert Mugabe and his Zanu PF party are "deliberately ignoring" addressing the country's deteriorating economic situation, using factionalism to divert…
Continue ReadingBiti – Zanu-PF factional feuds a diversionary tactic from economy mess
Biti: Zanu PF feuds a diversionary tactic
ZIMBABWE - There is no thought leadership … Tendai Biti Just this week, higher education minister Jonathan Moyo and presidential spokesman George Charamba publicly rowed over the succession of Mugabe…
Continue ReadingBiti: Zanu PF feuds a diversionary tactic
ZIMBABWE - Four Zimbabwe National Liberation War Veterans Association (ZNLWVA) members in the Mashonaland East province have been fired from the executive on charges of causing divisions and recruiting for…
Continue ReadingWar vets body fires four for recruiting members for Mujuru’s People First
ZIMBABWE - Zanu PF wants President Robert Mugabe’s spokesperson George Charamba to produce evidence linking senior ruling party officials to expelled vice-president Joice Mujuru’s People First project. The demands made…
Continue ReadingMujuru shakes fragile Zanu PF
ZIMBABWE - Demands for the changes have been on the agenda for opposition political parties since the last elections which were held on the 31st July in 2013. Some of the…
Continue ReadingPoll reforms: Biti takes Mugabe to court